Indlela yokudala iphrofayli elandelelanayo ye-backlink?
Kukho ezininzi iingcamango ezingalunganga kwiziko lokwakha unxibelelwano oluqhelekileyo kwishishini lokuthengisa. Kungakhathaliseki ukuba unamava amangaphi amava kulo mkhakha, awusoze wazi ngokuchanekileyo ukuba iGoogle yamkela njani indawo yakho kwaye yintoni le nkqubo yokukhangela eya kwenza umzuzu ozayo. Abathuthukisi be-Google kuphela kunye nabaphathi bewebhu bangakwazi ngokuqinisekileyo. Sifanele sisebenzise yiphi idatha esinazo kunye namava ethu ukuchaphazela izikhundla zethu zendawo.
Kukho iingxelo ezininzi eziqhelekileyo kunye neengcamango ezintsha malunga nama profayile e-backlink kunye ne-backlinks. Makhe sixoxe ngezona zinto ziqhelekileyo kubo:
"Rel = nofollow" izixhumanisi aziboneli naluphi na inani
"Rel = akukhofollow" itekisi ekhethekileyo ye-backlink echaza i-bots search unxibelelwano kwaye ungadlulanga nayiphi na ijusi yelinki kubo. Kukho iingxoxo ezininzi malunga nexabiso leenalathisi ezilandelayo. Ezinye i-webmasters zithi akukho mfuneko yokudala izikhonkco ezinjalo, ngelixa abanye bathi inkokhelo yokwenza i-backlinks ingancinwa. Engqondweni yam, akukho mpendulo ecacileyo kulo mbuzo njengoko ixabiso labo linokuxhomekeka. Ezi ziqhagamshelanisiweyo eziphambili azibandakanyi njengeziqwenga ze-standalone. Ngokomzekelo, ukuba siqala iwebhusayithi kwaye siyicebisa ngenani le-quality PR "nofollow". Ngenxa yoko, awuyi kubona ukunyuka ngokukhawuleza kwinqanaba leemoto. Ndiyicinga ukuba iGoogle inomsebenzi omhle wokuqonda "iqhosha elilandelayo" ngokubhekiselele kulo.
Nangona kunjalo, kukufanelekile ukukhankanya ezinye iinkalo apho iinqununu ezingahambelangayo zineempembelelo ezinkulu kwiziko leendawo kunye negunya lewebhu lewebhu. Ezi ndawo zibandakanya iiwebhusayithi ezilungisiwe, iiprojlli ze-backlink ezibandakanya "i-nofollow" kunye neemeko zengqungquthela zilungisiwe. Zonke iindawo ezilandelayo zixhamle iinkcukacha zangaphambili ze-backlink. Inokubangelwa zizathu ezininzi ngezizathu ezahlukeneyo ezifana nemisebenzi ye-spammy okanye iinkqubo ezibandakanyekayo.
Ndiye ndayisebenzisa i-backlinks kwindlela yam, ndizama ukuwafumana kwimithombo yewebhu ephakamileyo kwimibono yeblogi, amaqhagamshelwano, ukufakwa kwamashishini kunye nezinye iindlela zokwakha izixhumanisi. Ngenxa yoko, ndiphumelele iinqununu ezilungileyo kunye nomxholo othi "rel = nofollow. "Ezi ziqhagamshelana zilethe ukunyusa okungaphezulu kwe-100% kwii-keyword rankings.
Kungenxa yoko ndingatsho ukuba akukho mva ilandela i-backlink inokuzisa ixabiso kwiwebhusayithi yakho. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba zenziwe njani. Ubungakanani bendalo obungasemva kokulandela i-backlinks kusebenza ngokugqibeleleyo ukuze kulungelelanise ukulinganiswa kwezixhumanisi ezingaphezulu.
Ingaba umgangatho wekhwalithi?
Ukuba undibuze le mbuzo nje emva kokuhlaziywa kokugqibela kweGoogle Penguin, ndiza kukujonga njengeliso ngexesha elowo wonke umntu wayejonga kuphela iilun. Nangona kunjalo, ngeqendu lexesha, ugxininiso luye lwatshintshwa. Namhlanje, iiwebhsayithi ezininzi zikhupha ezinye imithombo yewebhu nangona zinamaqhagamshelwana amancinci ambalwa kwaye zinezonxibelelwano ezingenakubalwa kwi-spammy ukusuka kumaphepha athetha. Yingakho ii-sites ezine-backlink ezininzi zinokuphelela kwezinye izixhobo ezinobungakanani obuqulathekileyo. Kwiminyaka edlulileyo, sibone ukulungelelanisa okukhulu kunye nenani le-backlinks, kungekhona nje umgangatho wabo, elichaphazela abadlali beemarike ezinkulu kwii-TOP positions.
Ngaphezu koko, kunokuzwakala kukungaqhelekanga, kodwa kunjalo, ukuba unxibelelwano oluninzi kwi-domain efanayo kungakunceda, kwaye iGoogle iyayithanda. Akukho mngcipheko wokufumana izigwebo kwaye unokufumana inzuzo kuyo. Ngaphezu koko, inani elipheleleyo le-backlinks zangaphandle linokufaka isandla kwimigudu yakho ye-SEO njengokuba kuluhlu olubanzi lokubambisana. Abaphathi beWebhsayithi baqamba kwakhona le ngqamaniso yokwakha ikhonkco "i-link velocity Source . "